Singobani - ULLER
UNKULUNKULU WINTER: UMHLANGANO WESIFAZANE
I-Uller® ingumkhiqizo owenziwe ngabathandi be-FREERIDE. Imikhiqizo yezobuchwepheshe esebenza kahle kwabashibilika eqhweni abanolwazi oluningi abadinga umkhiqizo osebenza kahle kakhulu kunoma yisiphi isimo noma imfuneko yendawo.
Siletha igama lethu eSpain elivela eScandinavia, enye yezindawo ezihamba phambili ngesiko lasebusika elikhulu kakhulu, ikakhulukazi elivela eNorway kusukela u-Uller enguNkulunkulu Wasebusika lapho.
Umkhiqizo wokuqala wobusika baseSpain
I-Uller® ingumkhiqizo wokuqala we-100% waseSpain wezesekeli zasebusika. Siyiqembu labangani abathanda kakhulu abagibeli bokushushuluza be-freeride, abathathe isinqumo sokwenza imaskhi yethu yokushushuluza ukuze sithole okufanela indlela yethu yokushushuluza.
Abanye bethu bashibilika eqhweni kusukela besineminyaka emithathu kuphela futhi abathandi be-off-piste cishe abalingana neminyaka lapho ama-skis enesikidi esasibanzi kancanyana kunqenqemeni lwemali futhi wacwila emehlweni akho. Ngaleso sikhathi sasisebenzisa izibuko zeqhwa ezingaphezu kokuzisusa futhi sikusize, zaqina futhi zenza umbono waba nzima, manje nge-Uller® yethu okungeyona nje inkumbulo ethokozisayo.
Idalwe ukuhlangabezana nezidingo ezifuna kakhulu imodi ye-FREERIDE enezinto eziqondile nezisezingeni eliphezulu eziqinisekisa ukusebenza okuphezulu ezimweni ezimbi kakhulu. Sivivinya yonke imikhiqizo yethu ngaphansi kwengcindezi enkulu ukuqinisekisa ukuthi bayaphendula ngendlela ebesilindele ngayo.